Yoon Nadi – Rocket Online Shopping
Posts by Yoon Nadi
Home Author Yoon Nadi
About Yoon Nadi
Yoon Nadi has contributed4entries to our website, so far.
Animation ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒေါသထွက်နေတဲ့ နှင်းတောင်ဘုရင်မဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အအေးတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းချင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့…. အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂ အပိုင်း ၃ အပြာရောင်စာလုံးတွေကို နှိပ်လို့ ရပါသည်။ Down လို့ မရရင် gmail ပေးဖို့လိုပါမည် comment မှာ ပေးလို့ရသလို page မှာ ပေးလည်း ရပါသည်။ not...
တရုတ်သရဲကား ဖြစ်ပါတယ် အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ ဗိုဒိုအရုပ်ကို ဘာကြောင့်လုပ်ထားတာလဲ? အောက်လမ်းပညာတွေက တကယ်ရော ရှိပါ့မလား? မှတ်ချက် အရောင်ပြောင်းနေသော စာလုံးများကို နှိပ်လို့ ရပါသည်။ Download Link Down လို့မရင် Page (သို့) comment မှာ mail လာရေးပေးပါ ခဗျ Font မမှန်ရင် app ကို down ပေးပါ
၂၀၁၃ ခုနစ်ထုတ် Animation ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဂူတွင်းနေ မိသားစု အကြောင်းကို တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းဆို မလုပ်မှ အန္တရာယ် ကင်းမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ အသစ်အဆန်း လုပ်မှလည်း အန္တရာယ်ကင်းနိုင်မှာပါ။ တိုက်ကြီးတွေ ကွဲထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဂူတွင်းနေ ခလုမိသားစု ဂိုင်းနဲ့အတူ ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာတော့….. Download Now အပြာရောင် စာလုံးတွေကို...
စိုက်ခင်းထဲ လာလည်ကြတဲ့လူတွေအတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ ဝင်္ကာဘာလေးက ဘာအတွက်ပါလဲ? စိုက်ခင်းထဲ ဆေးဆိုင် ဘယ်လိုဖွင့်လဲ ဘာဆေးတွေ ရောင်းမှာလည်း? Triller ဖြစ်လို. သတ်ဖြတ်ခန်းတွေ ပါပါတယ်။ အပိုင်း၁ download အပိုင်း၂ Download Not Correct Font (Download Our App) Gmail ပေးပြီးမှသာ Down လို.ရပါမယ်။ Download လုပ်လို....
Magnetic Wifi Camera (HD Spy) Ks85,000.00 Ks35,000.00
Ahh bra - Discount Itmes Ks9,000.00 Ks4,000.00
Indoor Home Small HD Wifi Camera Ks66,000.00 Ks56,000.00
Multifunction Power Socket Wifi Camera Ks157,000.00 Ks99,000.00
Qcy bluetooth Speaker Ks20,000.00 Ks9,000.00
Key Smart Ks10,000.00 Ks6,000.00
Bed Boost Ks19,000.00 Ks9,500.00